Sannadkan, waxaa loo qorsheeyay in lagu soo bandhigo 2,5 kun hektar waraabinta gobolka, oo ay ku jiraan 1,9 kun hektar inta lagu guda jiro hirgelinta qaybta gobolka ee mashruuca federaalka "Dhoofinta wax soo saarka beeraha" ee mashruuca qaran "Iskaashiga caalamiga iyo dhoofinta", oo uu bilaabay Madaxweynaha Xiriirka Ruushka Vladimir Putin. In ka badan 1 kun hektar oo waraab ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa shirkadda beeraha "Novoe Zavolzhye" ee gobolka Volga.
Waraabinta ayaa fure u ah dalaga
Gudoomiyaha Gobolka Dmitry Azarov ayaa si isdaba joog ah carabka ugu adkeeyay muhiimada ay leedahay in la horumariyo nidaamyada waraabka gobolka: “Waxaan ahmiyad gaar ah siin doonaa mashaariicda ku saabsan dib u soo celinta dhulka. Kaliya dhulalkaas oo kale ayaa bixiya wax soo saar la hubo, oo markaa saamaynta dhaqaale ee ugu weyn. Sida laga soo xigtay Wasaaradda Beeraha ee gobolka, hadda qiyaastii 24,5 kun oo hektar oo dhul ah ayaa ku jira waraab. Dhul beereedka waraabka ah, 98% wadarta mugga baradhada ee laga soo saaro shirkadaha beeraha iyo beeraleyda beeraleyda (PFH) ee gobolka (qiyaastii 125 kun tan), 86% khudaar (94 kun tan), 55% oo soybeyn ah (15 kun tan) waa koray. , 24% miraha iyo miraha berry (in ka badan 3 kun tan). Gobolku wuxuu ku dhiirrigelinayaa beeraleyda inay soo bandhigaan inta ugu badan ee suurtogalka ah ee waraabka.
Wasiirka Beeraha iyo Cuntada ee gobolka Nikolai Abashin wuxuu xusay in mahadcelinta hirgalinta mashruuca qaran, beeraleyda la kabo ilaa 70% kharashaadka raasumaalka ee dhismaha iyo dib u dhiska nidaamyada waraabka. Barnaamijka federaalka ee horumarinta dib u soo celinta dhulka wuxuu suurtogal ka dhigayaa in la magdhabo ilaa 50% maalgashiga. Sidoo kale, sida ku xusan barnaamijka gobolka, beeraha waxay heli karaan kabitaan si dib loogu celiyo 20% kharashaadka biyaha (haddii ururku dhisayo ama dayactirayo xarumaha dib u soo celinta).
Sanadkii la soo dhaafay, gobolku wuxuu soo saaray talaabooyin cusub si loo kiciyo howlgelinta dhulka waraabka - tani waa bixinta deeqaha loogu talagalay horumarinta qiyaasaha naqshadeynta ee dayactirka, dib u dhiska iyo ballaarinta nidaamyada noocan ah. Dhamaadka Diseembar, ururada waxaa la aqoonsaday inay heli doonaan lacag si ay ugu diyaariyaan mashaariic dib u soo celinta dhulka beeraha oo wadar ahaan ka badan 7,5 kun oo hektar.
"Maanta waxaan soo bandhigeynaa dhul waraab ah oo aan tobanaan sano lagu waraabin," ayuu yiri wasiirka. - Hawsheennu waa inaan ilaalino xawaaraha horumarka ee dib u soo celinta dhulka iyo hagaajinta qaababka taageerada gobolka ee soo-saareyaasha beeraha. Dhererka nidaamyada dib-u-dhiska ee ka jira berrinka ayaa suurtagal ka dhigaya in lagu daboolo 45 kun oo hektar waraab. "
Gobolka Samara, maahan oo kaliya shirkadaha waaweyn, laakiin sidoo kale beeraha yaryar ayaa fulinaya mashaariic lagu soo celinayo laguna abuurayo nidaamyo dib u soo celin. Marka, gobolka Volga, 18 kun hektar ayaa ku jira waraab. Sannadkii 2019, shirkadda beeraha "Sev-07" LLC waxay ku fulisay qalab dib-u-habeyn farsamo ee nidaamka waraabka aag 572 hektar ah, beeraleyda beeraleyda Tsiruleva E.P. - dhul dhan 151 hektar. Iskaashatada wax soo saarka beeraha Novoye Zavolzhye waxay dhistay qayb cusub oo kanaalka waraabka ee kuyaala aag dhan 1,14 kun hektar oo qayb ka ah qaybta gobolka ee mashruuca federaalka "Dhoofinta wax soo saarka beeraha". Tani waa seddex meelood meel meel dhul ka mid ah 3,5 kun oo hektar oo gobolka ah oo laga soo saaray waraabka sanadkii la soo dhaafay. Sidaa darteed, shirkaddu waxay ka mid ahayd hoggaamiyeyaasha beeraha waraabka.
Sida laga soo xigtay Nikolai Savenkov, madaxa Novoye Zavolzhye SEC, in 2018 waxay horumariyeen mashruuc dib-u-soo-celin dhul oo leh aag dhan 2,2 kun hektar, iyo guud ahaan dhul-beereedka shirkaddu waa 5,1 kun hektar.
“Bishii Luulyo waxaan bilownay heerkii ugu horreeyay ee nidaamka waraabka beeraha oo ku fadhida dhul baaxaddiisu dhan tahay 570 hektar, bishii Nofembar waxaan u xil-saarnay marxaladda labaad isla aagga,” ayuu yiri Nikolai Savenkov. - Xarunta dib u soo celinta iskaashatada waxaa lagu soo daray qorshaha waxqabadka ee qaybta gobolka ee mashruuca federaalka "Dhoofinta wax soo saarka beeraha" ee mashruuca qaran "Iskaashiga caalamiga iyo dhoofinta", taas oo ay ugu mahadcelinayaan taas oo aan ka helnay kaalmooyin loogu talagalay hirgelinta mashruuca qadarka 76 milyan oo rubi. Sida laga soo xigtay isaga, tani waxay u saamaxday oo kaliya in la bilaabo nidaam waraab oo xiran, kaas oo ah shabakad balaaran oo dhuumaha dhulka la dhigo, oo leh hadiyo joogto ah oo ay biyuhu ka galaan rusheeyaha iyo mashiinada waraabka, laakiin sidoo kale inay iibsadaan 12 rusheeye. Sannadkan, bilaha Maajo iyo Juun, waxaa la qorsheynayaa in la soo bandhigo 1,16 kun oo hektar oo kale oo lagu waraabiyo. Iskaashatadu waxay diyaarisaa dukumiintiyo ay ku hesho kabid kale. “Tani waxay noo ogolaaneysaa inaan soo iibsano 12 mashiinada wax lagu buufiyo ah. Bishii Sebtembar waxaan qorsheyneynaa inaan ku daboolno 361 hektar oo kale nidaamka waraabka, ”ayuu yiri Nikolay Savenkov.
Beertu waxay soosaartaa digirta, dalagyada hadhuudhka - shaciir iyo qamadi. Waxay qorsheynayaan inay horumariyaan hadhuudhka. Nikolai Savenkov wuxuu carrabka ku adkeeyay in dib u soo celinta dhulka ay saameyn weyn leedahay isla markaana ay dammaanad gaar ah u tahay goynta xitaa xaaladaha abaarta.
Vasily Vasin, oo madax ka ah waaxda "Dhirta beeraha iyo beeraha", oo ah borofisar ka tirsan Jaamacadda Samara State Agrarian University:
- Dib u soo celinta dhulka waxay u baahan tahay in la horumariyo si xasilooni loo siiyo wax soo saarka beeraha iyo wax soo saarka dalaga, gaar ahaan isbedelka cimilada. Waa muhiim in la sii wado soo celinta nidaamka waraabka ee Spasskaya, oo laga dhisay gobolka Volga dhammaadkii 1960-yadii. Kadib, aagga beeraha halista ah, nidaamkan waraabinta wuxuu noqday il qoyaan aan la beddeli karin. Maanta, mahadsanid taageerada gobolka iyo mashaariicda maalgashi ee shirkadaha beeraha, dib u dhis nidaamsan oo awoodeeda ayaa la fulinayaa. Sidii sanadihii horeba, horumarintiisa door muhiim ah ayay ka qaadataa dhaqaalaha gobolka, maxaa yeelay waraabku waa goosasho la hubo sanad walba.
Source: Volga commune
Tags: baradho korayawaraabkaGobolka Samara
Beeritaanka baradhada hore ee dhul-gariirka 'Krasnodar Territory' wuu sii socdaa
Yukreeniyaan waxay saadaalinayaan hoos u dhac soosaarka dalaga
Soosaarka Khudaarta iyo baradhada Bariga Fog. Ka wada hadalka fikradaha horumarinta warshadaha